TAKUMI ine rudzii rwekudzora kunaka kuitira kuti iwane zvemhando yepamusoro?-IGNITION COILS-TAKUMI AUTO PART
Isu veTAKUMI tinoedza kuwana "Total quality" pamatanho matatu akazvimirira:
- Yakabatanidzwa otomatiki cheki
Eyedzo mamodule akabatanidzwa mune otomatiki yekugadzira kutenderera tarisa ese magungano kuti ave nechokwadi chekuti iwo chete ari mumamiriro akakwana anoramba ari mukugadzirwa. Vamwe vese vanobva vangobviswa pamutsetse vasati vapa mari isingaite.
Vashandi vanogara vachitarisa chiyero chebasa ravo pachavo uye kunyora mhedzisiro. Kana zvikanganiso zvikawanikwa, munhu ane hanya anogona kuita pakarepo.
- Yakazvimirira chigadzirwa chekuongorora
Kuongororwa kwechigadzirwa kunoitwa mukufambirana nekutonga kweanoshanda mune yakakosha onsite mhando murabhoritari, zvichiita kuti zvakawanikwa zvibatanidzwe mukuita kwekugadzira pasina kunonoka. Macheki asingakwanise kuitwa panzvimbo anoendeswa kumapoka akakosha kuQuality Assurance, ane michina yekuyedza inodiwa yavainayo.
Ese mafekitori eTAKUMI ane ISO/TS 16949 ane certification pamwe chete nemamiriro ekunze mwero ISO14001.
Inotevera Peji: Maitiro ekutonga kuti koiri inoda kuchinjwa here kana kuti kwete?